‘एक रातको होइन, एक पटकको १५ सय, जाने भए हाम्रैमा जाने हो’ – दर्पण छायाँ
मुख्य पृष्ठरोचक‘एक रातको होइन, एक पटकको १५ सय, जाने भए हाम्रैमा जाने हो’
‘एक रातको होइन, एक पटकको १५ सय, जाने भए हाम्रैमा जाने हो’
Admin | २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार २३:००	Comments
काठमाडौं : सुन्धारा जाने बाटोमा भएका दुई आकाशेपुलमा मानिसको भीड अ’त्यधिक थियो। त्रिपुरेश्वरपट्टिको पुलमा फुटपाथ पसलेहरू इयरफोन र मोबाइलका ग्लासजस्ता सामान फिँजाएर बसेका थिए।
पुलमा पाँचछ जना युवती यताउता गरिरहेका थिए। केहीले सलले मुख छोपेका थिए भने केहीले मास्क लगाएका थिए। एक युवतीले जिन्स पाइन्टमा क्रप टिसर्ट लगाएकी थिइन्। अर्की एक जनाले स्कर्ट र सेतो सर्ट लगाएकी थिइन्। पुलमा ओहोर–दोहोर गरिरहेका उनीहरू पुलमा अडेस लागेर बसेका पुरुषको नजिक जाँदै कुराकानी गरिरहेका थिए।
एक जना पुरुषसँग उनीहरूले के कुरा गरिरहेका छन् भनेर चासो राखियो, ‘यिनीहरू को हुन्? तपाईंलाई के भने?’ अकमकाएर उनले भने, ‘केही होइन। ‘जाने हो’ भनेर सोध्दै थिए।’ पुलको छेउमा आड लागेर बसिरहेका ती दुई युवतीसँग ग्राहक बनेर सोधियो– ‘कति हो नि रेट?’
‘नजिकै हो। यही धरहरा पछाडि। कोठा हो आफ्नै। कसैले केही गर्दैन।’
‘हामीलाई लु’ट्नुभयो भने नि?’
महानगरीय प्रहरी वृत्तनजिकैको आकाशेपुलमा चार जना पुरुष गफिँदै उभिइरहेका थिए। उनीहरू सबै २५–३० वर्षका देखिन्थे। पुलमा छिटफुट मानिस हिँडिरहेका थिए। केही समयपछि उनीहरू भएको ठाउँमा दुई युवती देखापरे। उनीहरूमध्ये एकले सर्ट र स्कर्ट लगाएकी थिइन्। अर्की एक जनाले सर्ट–प्यान्ट लगाएकी थिइन्। एक जनाको हातमा गाढा नीलो रङको ब्याग झुण्डिरहेको थियो। उनीहरू त्यहाँका पुरुषहरूसँग गफिन थाले। एक युवतीले ब्यागबाट चुरोट झिकेर सल्काइन्। केही नजिक पुगेपछि उनीहरूको कुरा सुनियो। उनीहरू रात कहाँ बिताउने भन्नेबारे कुराकानी गरिरहेका थिए।
ती पुरुषसँग सोध्दा उनले यौ’ ‘नक’र्मी तेस्रोलिंगीसँग रेट नमिलेको बताए। ‘मलाई जाऊँ–जाऊँ त लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, रेटै मिलेन। १५ सय रे। त्यति धेरै तिरेर यस्तासँग के जानु? बरु गेस्टहाउसमा अलि बढी पैसा तिर्‍यो भने भन्याजस्तो केटी पाइन्छ।’ सुर्खेतबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि अर्काे साता कतार उड्न लागेका उनले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘काठमाडौँ, माछापोखरीमा साथीसँग बस्छु। आज एउटीलाई उतैतिर लैजाऊँ भनेको। यो पुलमा त यौ’ ‘नक’र्मीको लस्करै हुन्छ। उनीहरूले भनेको ठाउँमा गयो भने त लुटेर पठाइदिन्छन्।’
ग्राहक खोजिरहेका यौ’ ‘नक’र्मीहरू बेला–बेला चर्काे स्वरमा अ’श्ली’ल श’ब्द बो’लिरहेका थिए। बाटो काट्नका लागि पुलमा हिँडिरहेकालाई उनीहरू वास्ता गर्दैनथे। तर, देहसुखको खोजी गरिरहेका जस्तो देखिइने पुरुषहरूसँग भने उनीहरू टाँसिन्थे, ठोक्किन्थे। रेट नमिल्दा उनीहरू भद्दा श’ब्द बोलिरहेका हुन्थे।
पशुपतिका पाँच हजार बादँरलाई भोजन नगराई मुखमा अन्न नहाल्ने ‘पवन’ मासिक ५ लाख खर्च
उमेरअनुसार मूल्य, घर–घरमै युवतीहरु डेलिभरी
केटीहरुले एक चुल्ठी बाट्दा केटाहरुमा उ’त्तेजना ! स्कुलमा लगाईयो अनौठो नियम
रुसी आ’क्रमण बा’हेक अर्को एउटा ‘ग’म्भीर’ आ’क्रमणसँग जु’ध्दै यु’क्रेनी युवा
“दु’र्घटनामा परेरमा, शिक्षक शर्माको कैलाश खोलामा अ’न्तिम दा’हासंस्कार गरियो” २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार २३:००
पाकेट मा’रेको आ’रोपमा अभिनेत्री रुपा प’क्राउ’ २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार २३:००
जन्ती बो’केको टिपर दु’र्घटना : दुई ज’नाको ज्या’न गयो, २४ जना घा’इते २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार २३:००
म्यादी प्रहरीको तलब ३० हजार माथि, १ लाख मात्रै भर्ना लिन अर्थको अनुमति २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार २३:००